Jose Mourinho ‘Waa Inuu Raaligeliyo Dhakhtarada Chelsea Eva Carneiro’. | Saxil News Network
Jose Mourinho ‘Waa Inuu Raaligeliyo Dhakhtarada Chelsea Eva Carneiro’.
Tababaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho ayay tahay inuu raaligeliyo dhakhtarada kooxda Eva Carneiro madaama uu kumanaan dad ah ku hor ceebeeyay, sidaasi waxaa sheegay madixii hore ee caafimaadka ee kooxda Liverpool.
Peter Brukner oo haatan ah dhakhtarka xulka kubada Cricker ee dalka Australia ayaa sheegay in eedeynta Mourinho ay boqolkiiba boqol qaldaneyd, waxaana uu sheegay inay tahay inaan la bedeli Carneiro.
Carneiro oo 41 sanno jir ah ayaa daweysay Eden Hazard ka dib markii la jalaafeeyay daqiiqadihii ugu danbeysay ee kulankii ay barbaro 2-2 la galeen kooxda Swansea.
Waxaana ay taasi keentay in Blues ay in muddo ah ahaato 9 ciyaaryahan ka dib markii Thibaut Courtois casaan laga siiyay.
Carneiro ayayna u muuqataa inay waayeyso booskeeda kursiga keudka kulanka axada ee ay Chelsea la ciyaareyso Manchester City ka dib markii uu Mourinho uu ku tilmaamay shaqaalaha koxoda caafimaadka kuwa fudeyd badan oo doqomo ah isagoo hadalkiisa raaciyay inuu fahamsan yahay ciyaarta.
Isagoo u hadlayay BBC Radio 5 live, Brunker ayaa sheegay in Mourinho uu soo bandhigay ixtiraamdarro aad u weyn.
Ninka reer Australia ayaa sheegay in Carneiro iyo duugaha Jon Fearn inay si saxan u dhaqmeen iyagoo sugay inuu waco garsoore Michael Oliver kaasoo u tilmaamay inay daweeyaan Hazard.
“Ma ahan shaqada tababaraha inuu amro shaqaalaha caafimaadka” ayuu yiri Bruker oo ahaa madaxii caafimaadka Liverpool. “Ma arkeysid dhaqaatiir u sheegeysa tababare inuu qof hebel ciyaarsiiyo ama inuu ciyaaro shaxda 4-3-3.
“Dhakhtarada waa ay saxneyd boqolkiiba 100, tababarahana feker ahaanteyda wuu qaldanaa boqolkiiba 100.
“Waa inuu raaligeliyo, kooxdana waa inay xaqiijiyeen inaan dhakhtarada iyo duugaha aysan shaqadooda ku weynin arintaan.
“Kumanaan dad ah hortooda ayaa lagu ceebeeyay, wax qalad ah ma aysan sameynin.”